ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: 11/1/10 - 12/1/10
Labels: ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း, သတင်း, ဆောင်းပါး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ (၃၀၊၁၀၊၂၀၁၀) မှ (၂၆၊၁၁၊၂၀၁၀) ရက်ထိ လှုပ်ရှားမှုများ
Current Movement of NLD in BURMA From 30.10.2010 to
Posted by flyingpeacock at 9:58 AM0comments Links to this post
မြောက်ကိုးရီးဘက်မှ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရှိ yeonpyeong ကျွန်းသို့ ဒုံးလက်နက်များဖြင့် စတင်ပစ်ခတ်မှု့ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
Posted by flyingpeacock at 10:11 PM0comments Links to this post
မြောက်ကိုးရီးဘက်မှ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရှိ yeonpyeong ကျွန်းသို့ ဒုံးလက်နက်များဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ စတင်ပစ်ခတ်
ဒီကနေ့နေ့လည်၂နာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်က မြောက်ကိုးရီးဘက်မှ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရှိ yeonpyeong ကျွန်းသို့ ဒုံးလက်နက်များဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ လူနေအိမ်ပေါင်းများစွာမီးလောင် ပျက်ဆီးပြီး တောင်ကိုးရီးယားစစ်တပ်မှကမ်းခြေစောင့် စစ်သား(၂)ဦးသေဆုံးပြီး အရပ်သား(၃)ဦးမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိပြီး၁၅ယောက်မှာသိပ်မပြင်းထန်သောဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူဦးရေဟာ ဒီထက်ပိုမိုလာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်း တောင်ကိုးရီးယားအသံလွှင့်ဌာနKBSမှထုထ်လွှင့်သွားပါတယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားဘက်က ပစ်ခတ်မှုဟာ နေ့လည် ၄နာရီခွဲအချိန်ထိ ပစ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်း (၂၀၀)လောက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားစစ်တပ်မှလည်း ဒုံးလက်နက်များဖြင့် အချက်ပေါင်း၈၀ခန့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် ညနေ ၆နာရီအချိန်မှာတော့ တိုက်ပွဲမှာရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။ နိုင်ငံ ၏ အချို့ နေရာများ ကို အရေးပေါ်အခြေအနေ သတ်မှတ်ထားပြီး တောင်ကိုးရီးယား ပူးတွဲတပ်မများ အသင့်ပြင်ထားကြောင်း တောင်ကိုးရီးယားမီဒီယာများမှ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ထိုကျွန်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ သူများဟာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးနေထိုင်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။
( ဒေါင်းမာန်ဟုန် )
SEOUL, South Korea – North Korea bombardedaSouth Korean island near their disputed western border Tuesday, setting buildings ablaze and killing at least two marines after warning the South to halt military drills in the area, South Korean officials said.
မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သားငယ် မောင်ထိန်လင်း တို့၏ ပျော်ရွှင် ကြည်နှုးနေကြသော ရုပ်သံ
Posted by flyingpeacock at 9:37 PM0comments Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗွီအိုအေ ရုပ်မြင်သံကြား သီးသန့်ဆွေးနွေးခန်း
Posted by flyingpeacock at 10:46 AM0comments Links to this post
ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် ရေးလိုက်သော စာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂုမင် အီလ်ဘိုကနေ ကိုရီးယားပြည်သူများထံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အားပေးဘို့ကိုယ်တိုင် ရေးသား ပေးပို့ လိုက်သော စာဖြစ်ပါသည်။
Posted by flyingpeacock at 10:50 AM0comments Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် အမေးအဖြေ
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဂျွန်ဆင်ပဆင် တို့၏ ဘီဘီစီ အင်တာဗျူး
Congratulation Letter for DASSK
Dear Ms. Aung San Suu Kyi
I have the great pleasure and honor of extending my sincere congratulations to you on your freedom from house arrest in army-ruled Burma. Your freedom clearly reflects that your people of Burma are confident in your leadership and passion. And also I have no doubt you would resume an influential political role in Burma and successfully respond to your people’s expectation and need.
Once again congratulations on your freedom and hope to work for the peace and prosperity of the country, Burma.
Standing Co-Chairman, IPCNKR (International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights)
Chairman, National Assembly Human Rights Forum
Tel : 82 +2788 2017
Posted by ကိုကိုနာရ်ဂစ် at 12:52 AM0comments Links to this post
“ရပါတယ်၊ ကြားရတာလည်း ၀မ်းသာပါတယ်။” ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 1:30 PM0comments Links to this post
Posted by flyingpeacock at 1:11 PM0comments Links to this post
TBS ဂျပန်သတင်းဌာနမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်း ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
Posted by HRmyanmar at 11:39 PM0comments Links to this post
Posted by HRmyanmar at 1:43 PM0comments Links to this post
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်း နှင့် NLD ရုံးရှေ့ အခြေ အနေ ( ၁၂ . ၁၁ . ၂၀၁၀ | ည ၇ နာရီ )
Posted by flyingpeacock at 1:34 AM0comments Links to this post
Posted by HRmyanmar at 2:48 AM0comments Links to this post
KYO Korea Branch
Posted by ကိုကိုနာရ်ဂစ် at 12:07 AM0comments Links to this post
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သော နအဖစစ်သံရုံးရှေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ နှင့်ဆန္ဒပြသပွဲ ( ကိုရီးယား )
Posted by flyingpeacock at 8:12 PM0comments Links to this post
အဘ ဦးဝင်းတင် နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် ( BCJP )
အပိုင်း ၁ (youtube)
အပိုင်း ၂ (youtube)
Posted by HRmyanmar at 6:01 AM0comments Links to this post
Posted by HRmyanmar at 12:19 AM0comments Links to this post
AlJazeera သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ မြန်မာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း လက်ရှိအခြေအနေ
Posted by flyingpeacock at 9:55 AM0comments Links to this post
( ၂၀၁၀ ) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု့အစီအစဉ်များကို လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။
Posted by flyingpeacock at 9:31 AM0comments Links to this post
Posted by HRmyanmar at 12:12 AM0comments Links to this post